DIBANA NOPARKER POSEY KAGQR. SMITH KWITREYILA ENTSHA 'ELAHLEKILEYO KWINDAWO' - ULAHLEKILE ESITHUBENI
Ndibize Ngegama Lakho
Olunye lolona tshintsho lukhulu ekuqalisweni ngokutsha kweNetflix ye-classic ye-1960s sci-fi show Ulahlekile kwisithuba kwindima eyimpazamo kaGqirha Smith, owayedlalwe yindoda (uJonathan Harris), kodwa ngoku uza kuba ngumntu obhinqileyo odlalwa nguParker Posey omangalisayo. Jonga i-trailer iNetflix ekhutshiweyo ukusazisa kuDkt.Smith omtsha apha ngasentla.
Into endiyithandayo kakade yile, kule trailer, sele sibona umboniso udlulisa uvavanyo lweBechdel-Wallace njengamagama amabini, abalinganiswa besetyhini bathetha omnye komnye malunga nenye into ngaphandle kwendoda. Emva kwayo yonke loo nto, kuninzi ekunokuthethwa ngayo kwimishini yendawo engahambanga kakuhle. Ngcono nangakumbi, uGqr. Smith unamandla okuba sisikhohlakali esikhulu, okanye i-anti-hero, kwaye kuhlala kumnandi ukubona ezo ndawo zidlalwa ngabafazi.
Kuya kufuneka nditsho, nangona kunjalo, ndibekiwe kancinci yingxoxo kule trailer. URobinson matriarch, Maureen (Molly Parker) ubuza uGqirha Smith, bendizibuza ukuba ujongana njani nayo? Ukuba ngumgcini wazo zonke ezo mfihlo. USmith uyaphendula, Kuya kufuneka ufumane indawo ngaphakathi apho ubeka khona izinto ongafuni ukuba omnye umntu azi. Apho kungenakulimaza wena okanye omnye umntu. Kuphela… yinxalenye yomsebenzi.
Ke… ujongana nokugcina iimfihlo ngokufumana indawo ngaphakathi kwakho ngaba iimfihlo ziya? Ewe. Ukuba loo ngxoxo ayinqunywanga ngendlela enomdla kule trailer, bekuya kuba kubi ngakumbi. Okwangoku, ndinethemba lalo mboniso. UPosey noParker ngabadlali abamangalisayo, kwaye ndemba izinto endizibonileyo kwiitreyila zangaphambili.
Ucinga ntoni? Ngaba uya kujonga Ulahlekile kwisithuba ?
(nge INetflix kwiYouTube , umfanekiso: iscreencap)
Knight Yeegeorge Ezingcwele
Isishwankathelo sebali lesipho ngo-2015
Imvukelo yempangelo ye-mako mori pacific
Ihlabathi leemfazwe zowesifazane
ukapteni waseMelika masiye kwizithandani
kutheni amagqwirha eneminqwazi etsolo